The iPhone 7 bụ ugbu a gọọmentị, anyị na-egosi gị atụmatụ ya niile | Akụkọ akụrụngwa
Ignacio Sala | | Mobiles, Noticias
Mgbe ọtụtụ ọnwa nke asịrị gasịrị, ụlọ ọrụ ndị Cupertino mechara kpughee iPhone 7 a na-atụ anya ya nke ukwuu. ngwaọrụ nke Apple chọrọ iji nọgide na ụlọ ọrụ na-ere ngwaọrụ kachasị n'ihe banyere njedebe dị elu Anyị na-ekwu. A awa ole na ole gara aga, anyị gwara gị otú iPhone 6s si bụrụ ihe kasị mma-ere elu-ọgwụgwụ ọnụ na ụwa n'oge nke abụọ nkeji iri na ise nke afọ a na Apple bu n'uche bụ na-ya na ụzọ
Asịrị mbụ banyere ngwaọrụ a malitere igbasa ụbọchị ole na ole mgbe e gosipụtara iPhone 6s na ruo oge ole na ole ha nọgidere na-ebipụta. Emechapu otutu asusu ndi a ka anyi huru na isi okwu. N'ebe a, anyị na-egosi gị njirimara niile nke njedebe ọhụrụ nke ụlọ ọrụ Apple.
1 IPhone 7 imewe
2 IPhone 7 ihuenyo
3 IPhone 7 njikọ
4 Igwefoto ihu na azụ nke iPhone 7
4.1 Igwe n'ihu nke iPhone 7 na iPhone 7 Plus
4.2 Igwefoto IPhone 7
4.3 Igwefoto IPhone 7 Plus
5 IPhone 7 nchekwa ikike
6 IPhone 7 agba nnweta
7 IPhone 7 nhazi
8 Ahịa nke iPhone 7 na iPhone 7 Plus
9 Nnweta iPhone 7 na iPhone 7 Plus
IPhone 7 imewe
Mmiri ahụ achọrọ na uzuzu nke iPhone ka emechara kwenye na nke ọhụrụ iPhone 7 na-enye anyị asambodo IP 67 nke mmiri na uzuzu. IPhone 6s, dị ka anyị gosipụtara gị n'ọtụtụ vidiyo, na-eguzogide mmiri n'ụzọ zuru oke, ma ọ dịkarịa ala otu awa ma na-ejighị bọtịnụ mmalite, ebe mmiri nwere ike ịbanye ma ọ bụrụ na anyị ejiri aka mmiri ma ọ bụ n'okpuru mmiri pịa ha.
Finalmente ihe nkedo 3,5 mm kpamkpam na iPhone 7, nke putara na mbelata nke ọnụ ma e jiri ya tụnyere ihe atụ gara aga. Ọnwụ a emetụla usoro nke ọnụ, nke na-aga n'ihu na-enye anyị ọdịdị dị ka iPhone 6, nke ewepụtara afọ abụọ gara aga. N’adịghị ka ihe Apple maara anyị ahụ, afọ abụọ ọ bụla ụlọ ọrụ na-agbanwe atụmatụ nke ọnụ, mana oge a mgbanwe ndị ahụ adị obere ma ọ dị ka ha ga-eche maka afọ ọzọ ịgbanwe ya, ha ga-erite uru nke iPhone 10 ncheta ime otú ahụ.
Mkpochapu nkpu isi ekweisi amanye ụlọ ọrụ ahụ iwekota àmụmà àmụmà na àmụmà ka jaak nkwụnye, nke mere na ndị ọrụ niile tinyere ego na ekweisi dị mma nwere ike ịga n'ihu jiri ha na ụdị ọhụrụ nke iPhone.
Igodo ụlọ ka bụ akụkụ bụ isi nke ọnụ, na mgbakwunye na ịbụ ihe njirimara nke otu. Apple maara nke a ma melite ọrụ ya site n'ịgbakwunye ọrụ nwere nrụgide ọhụrụ nke na-enye anyị ohere iwere karịa uru nke teknụzụ 3D Touch.
Ntinye usoro ntinye ihe ka bu otu n'ime ọrụ ndị anyị na-ahụghị na njedebe ụlọ ọrụ ahụ, yabụ anyị ga-anọgide na-eji eriri àmụmà iji chaji ekwentị. Usoro nkwụnye ụgwọ a ga-adị mma iji nwee ike ịnụ egwu na ekweisi mgbe anyị na-akwụ ụgwọ ngwaọrụ ahụ, otu n'ime nsogbu ndị bụ isi nke mkpochapụ jaket 3,5 mm na-enye anyị.
Apple ọ na-adịghị esogbu na-enye a ngwa ngwa odori usoro yiri ihe anyị nwere ike ịchọta na ụdị Samsung kachasị ọhụrụ. Usoro a na-enye anyị ohere ịkwụnye ngwaọrụ ahụ na ọkwa ụgwọ a na-anakwere karịa n'oge na-adịghị anya, ọrụ dị mma maka ụbọchị ndị ahụ mgbe anyị na-eji njedebe anyị egwu.
Akụkụ ọzọ mara mma nke na-adọta uche nke ọnụ ọhụrụ a bụ nchịkọta nke eriri azụ ndị a na-eji dị ka antenna iji melite nnata nke akara ngosi ekwentị site na njedebe. Ọzọ aluminom eji mee ihe maka ijiri ngwaọrụ a ka sitere na usoro 7000, alloy siri ike karie nke ejiri na iPhone 6 na iPhone 6 Plus nke nyere aha ya Bendgate a ma ama.
IPhone 7 ihuenyo
Apple ka na-ejighi teknụzụ OLED na njedebe ya. IPhonedị iPhone ọhụrụ ahụ na-aga n'ihu na-eji teknụzụ LCD nke ụlọ ọrụ ahụ na-eji n'afọ ndị na-adịbeghị anya, ya bụ, na ụfọdụ mmelite nke na-eme ka ogo nke ihe oyiyi ha gosipụtara anyị dịkwuo mma, mana nke ahụ anaghị ekwe ka melite oriri batrị nke ọnụ . Ihe ngosi ohuru nke iPhone 7 gunyere ihe nhazi ihe oyiyi nke na-eme ka nlele di nma na onodu onodu oku di iche, ibu ihe kariri 50% karie iPhone 6s. Igwe kristal eji emebeghị ka sapphire, dịka a mara ọkwa anyị ruo ọtụtụ afọ, mana site na ịbawanye ọnụahịa nke ọnụ, ọ ka bụ nhọrọ Apple na-atụle ugbu a.
A na-emepụta kristal nke ọdụ a site na usoro mgbanwe mgbanwe ion abụọ nke na-enye anyị ohere awade ukwuu inogide na-eguzogide na molekụla larịị. Nsogbu dị n'ụdị iko a bụ na ọ naghị eguzogide ọgwụ na nsogbu, nke na-amanye ọtụtụ ndị ọrụ ka ha jiri ndị na-echebe ihuenyo ma ọ bụrụ na ha achọghị ịhụ etu iko nke ọdụm ha si agbaji site na ọdịda dị mfe.
Apple ka na-adịghị erite uru nke n'ọnụ nke ọnụ Dị ka a ga - asị na ụlọ ọrụ Samsung na - eme, akụkụ ụfọdụ ga - eme ka ịgbasa nha ihu ma ọ bụ belata mkpokọta ngwaọrụ ahụ, ihe a nabatara ọkachasị na ụdị Plus. Dị ka anyị pụrụ ịhụ Apple na-aga n'ihu na-aga megide tide na nke a dị ka nke ọma dị ka ndị ọzọ na m kwuru.
IPhone 7 njikọ
Naanị njikọ nke iPhone 7 nyere mgbe wepụchara isi okwu isi Ọ bụ ụdị àmụmà, nke anyị ga-eji buo ma gee egwu site na ekweisi ụlọ ọrụ na-enye anyị na igbe ọnụ. Ebubo njikọ njikọ Smart ebubo, dị na iPad Pro emesịbeghị pụta. Njikọ a na-enye ndị ọrụ ohere ijikọ kiiboodu na ọdụ ya nke na-enweta ike dị mkpa iji rụọ ọrụ. Anyị amaghị ma enwere ike iji ụdị njikọ a iji nyefee ike na ngwaọrụ ahụ, nhọrọ dị mma ruo mgbe ụlọ ọrụ ahụ na-enye nsogbu iji nye usoro ntinye ọkụ.
N'oge a njikọ USB-C adịghị na iPhone 7, mana ọ bụrụ na ụlọ ọrụ Cupertino chọrọ ịgbaso iwu ndị Europe nyere, ọnụ na-esote ga-emejuputa ụdị njikọ a na ọnụ na-esote afọ, ma si otú na-ewepụ àmụmà njikọ na bụ nanị dakọtara na Apple ọnụ.
Iji mezuo ihe efu nke jack Apple ewepụtala AirPod ọhụrụ, ekweisi ikuku na-enye anyị nnwere onwe nke awa 5 na-enweghị nsogbu, yana nke ahụ na-akwụ ụgwọ ntọala anyị na-eru elekere 24 nke egwu na-enweghị ebubo isi.
Igwefoto ihu na azụ nke iPhone 7
Igwe n'ihu nke iPhone 7 na iPhone 7 Plus
Apple amaliteghachiri igwefoto n'ihu nke iPhone ọzọ, na-agbasa mkpebi ahụ na megapixels 7 na mgbakwunye na ịgbakwunye ihe oyiyi ihe oyiyi dijitalụ.
Igwefoto IPhone 7
Banyere igwefoto nke ụlọ ọrụ ọhụrụ nke ụlọ ọrụ ahụ, Apple na-azọrọ na o nwere mma ma ihe mmetụta mmetụta na nhazi ọsọ. Na mgbakwunye, ihe mmetụta ọhụụ a na-enye anyị ọfụma na-egbukepụ egbukepụ na nke ahụ na-enyekwa anyị ohere inweta ogo onyonyo dị elu n'ọnọdụ ọnọdụ dị ala. Mgbe afọ abụọ gasịrị, Apple emesịa gbakwunye ihe nlele anya na ihe nlereanya a.
Emegharịala ọkụ ọkụ eji na iPhone 7 emelitere na-enye ngụkọta nke 4 LEDs, ma e jiri ya tụnyere LED abụọ nke jikọtara iPhone 6s. Igwe ọkụ ọhụrụ abụọ a na-enye anyị ohere ịnweta ọkụ okpukpu abụọ na mgbakwunye na inye aka ime ka elebara anya nke ọma mgbe anyị nwere mkpa iji igwefoto iPhone eme ihe gbara ọchịchịrị.
Igwefoto IPhone 7 Plus
The iPhone 7 Plus na-ebupụta igwefoto igwefoto abụọ nke na-enye anyị igwefoto 12 megapixel abụọ nke, na mgbakwunye na ime ka agba nke njide (igwefoto ọ bụla nweta agba dị iche) na-enye anyị oke omimi dị omimi, otu n’ime isi ihe mere ndị nrụpụta ji agbakwunye sistemụ igwefoto abụọ a na njedebe ha.
Igwefoto abụọ ahụ (otu akụkụ sara mbara na nke ọzọ telephoto) na-enye anyị ohere ijikọta nsonaazụ nke ha abụọ iji nweta ọmarịcha onyogho nke rue ugbu a anyị ga-eji mpịachi nweta ha. Igwefoto a nwere ike ịrụ ọrụ ijeri 100 na njide ọ bụla n'ime nanị milliseconds 25 ..
IPhone 7 nchekwa ikike
O yiri ka n'ikpeazụ, Apple amatala na ọ na-enye ihe kachasị oke ọchị na-enye ihe ntinye ntinye nke 16 GB nke nchekwa, ohere nke belata n'ezie karịa naanị 10 GB na-ewepụ ohere nke sistemụ arụmọrụ nwere. The iPhone 7 ga-adị na ya dị ọnụ ala mbipute na ebe nchekwa nke 32 GB. Site ebe ahụ anyị na-aga na ụdị 128 GB na ụdị 256 GB, ihe nlereanya na-agbanahụ akpa nke ọtụtụ ndị ọrụ, ọkachasị ụdị Plus.
16dị XNUMXGB abụwo otu n'ime ụdị kachasị ere n'ihi nsogbu nchekwa ọ na-enye, ma na mbata nke ụdị 32 GB, o yikarịrị ka ụdị ọhụrụ a ga-abụ onye kachasị ere ahịa nke ụlọ ọrụ ahụ, ebe ndị 32 GB na-enye anyị ihe karịrị ohere zuru ezu ka anyị wee ghara ịmanye ibudata ihe oyiyi nke ngwaọrụ anyị kwa abụọ na atọ.
IPhone 7 agba nnweta
N’ụbọchị ndị a, anyị mere ka ị mata nkwenye ndị a agba ọhụrụ nke ọhụrụ iPhone 7 ga-abata: nke na-egbuke egbuke ojii na ohere ojii. Emechara gosipụta agba ọhụrụ abụọ a, na-ahapụ agba agba Blue Blue, acha anụnụ anụnụ siri ike nke a nụrụ asịrị na ọnwa ole na ole gara aga dịka agba ọhụụ maka iPhone 7 na ndị sụgharịrị ya nyere nsonaazụ dị egwu. Site na agba ọhụrụ abụọ a na efu nke Space Gray, onye ọrụ ọ bụla chọrọ ịzụta ọnụahịa ọhụrụ a ga-enwe ike ịhọrọ n'etiti agba ndị a. Jet ojii (kenkowaputa nwa), Matte nwa, Pink, Gold na Silver.
IPhone 7 nhazi
Ihe nhazi ohuru nke sitere na aka nke iPhone 7 bu A10 Fusion, ohuru ohuru nke ibe ya na ndi oru aka ya. Dị ka a kọrọ site Apple na isi, A10 Fusion chip bụ 40% ngwa ngwa karịa mgbawa A9 nke dị ugbu a n'ime iPhone 6s na iPhone 6s Plus.
N'ikpeazụ na mgbe ọtụtụ ntule, ihe nhazi ọhụrụ a TSMC arụpụta ya. Mgbapu A10 na 3GB RAM nke ihe mgbakwunye Plus na-enye anyị, na-enye arụmọrụ dị egwu ma e jiri ya tụnyere processor gara aga na iPhone 6s, nke 2 GB nke RAM jisiri.
Ahịa nke iPhone 7 na iPhone 7 Plus
iPhone 7 32GB: euro 769
iPhone 7 128GB: euro 879
iPhone 7 256GB: euro 989
Nnweta iPhone 7 na iPhone 7 Plus
Ndoputa ga amalite na Septemba 9 ma site na Septemba 16 enwere ike ichikota ya na ulo ahia. Ga-adị na ọtụtụ mba otu ubochi egbe, ihe na-emebeghi kemgbe.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Telephony » Mobiles » IPhone 7 bụ ọkwa ugbu a, anyị na-egosi gị atụmatụ ya niile
Enwere m obi uto ... nke mbụ na ha setịpụrụ ọnọdụ na nke ahụ dị ezigbo mma ... n'ihi na ọ bụ mmalite nke teknụzụ ... na eriri ga-akwụsị kpamkpam ... mana ... ọ na-agụnye akpa ndị mmadụ ... ọ bụrụ na ịchọrọ ịtọ ọnọdụ, nkọwa ị ga-enye ekweisi bụ ihe ha kwesịrị ime ... anyị na-ewepu eriri ma ekwentị na-abịa na ekweisi na eriri ... n'ihi na ọ bụrụ na ịchọrọ iji eriri ... zuta ha na dolla 150 ... kedu etu ndi Apple si di na njikere ... ya na ikpe na anyi amaworị na ndị mmadụ (atụrụ) ga-akwụ kwụ n'ahịrị iji zụta ha ka ha bụrụ ụdị ejiji ... ọ na - emetụ m na a ngosi ahụ apụtaghị na ekwentị n'oge ọ bụla ... niile na ihuenyo na ụlọ ahịa foto nke Chineke na ekwentị ahụ yiri okomoko ... n'ikpeazụ ... curiosities
Microsoft na-arụ ọrụ na Skype Otu ga-ama Slack aka